प्रक्रिया बिना नै हस्पिटल कब्जा गर्न खोजियो : जीवन गौतम - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
प्रक्रिया बिना नै हस्पिटल कब्जा गर्न खोजियो : जीवन गौतम
जीवन गौतम (सहजकर्ता–राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान)
दाङको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्ने क्रममा अहिले आएर केही बिबाद उत्पन्न भएका छन् । अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरणदेखि कर्मचारी नियुक्तिसम्मका बिबाद चुलिदै गएका छन् । अझ भन्नुपर्दा एक थरीले सरकारले दाङमा घोषणा गरिसकेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्यत्र सर्न सक्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिन थालेपछि यसको बिबाद छताछुल्ल भएको छ । प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहजकर्ताको रुपमा नियुक्त गरेका सहजकर्ता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जीवन गौतमसँग गरिएको कुराकानीको सार संक्षप । –सम्पादक
– राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम कसरी अघि बढिरहेको छ केही जानकारी राख्नुभएको छ ?
तर यो प्रतिस्दर्धी र निजी संस्था हो त्यसको मालिकलाई त्यसको मालिक भनेको व्यापारी स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीलाई सिनेटमा ल्याएर राख्ने काम गरियो । नेपालगञ्जकै भवानी राना जो अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई ल्याएर राखियो । दाङबाट देवनारायण चौधरीलाई त राखियो तर उहाँको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालसँग कुनै साइनो र सम्बन्धै छैन । उहाँ कहिल्यै पनि त्यो सम्बन्धमा जोडिनु भएको छैन ।
त्यसकारणले राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा योगदान पु¥याएको दंगालीहरु राप्तीवासीहरुलाई वाइपास गरियो र सिनेट बनाइयो ।
– खासमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनेमा विवाद कहाँनिर हो ?
– राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनेत्रै लैजाने कुरा भएको छ रे नि त ?
पहिलो कुरा त यो हावादारी कुरा हो । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई विकास गर्ने आधारमा ऐन बनेको छ । यो कानुनद्धारा स्थापित संस्था हो । कुनै मन्त्रीको लहड्मा, कुनै कर्मचारीको लहड्मा, कुनै व्यक्तिको लहड्मा स्थापित भएको होइन । यो संस्थालाई सिध्याउनलाई धरासायी पार्नलाई लागिएको छ । उपकुलपतिले बुटवल लैजान्छु भन्नु भएको छ रे । यो बुटवल जानलाई नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सांसदमा लिएर कानुन संसोधन गरेर मात्रै लैजान सकिन्छ । संगीता भण्डारीको इच्छाले लमही जाने तुलसीपुर जाने यात वुटवल जाने सम्भव छैन । यो मान्छेहरुलाई भ्रम सृजना गर्ने भ्रम पैदा गर्ने र त्यसको आधारमा आफ्ना स्वार्थका काम पूरा गर्ने मात्रै हो ।
– कतै भागबण्डा नमिलेको त होइन ?
मेरो कुरा यति मात्रै हो चाहे यो सरकार जसको सुकै नेतृत्वमा होस् सबै राजनीतिक दलहरुलाई समेटने गरी अगाडि वढ्नुपर्छ । हिजो सबै राजनीतिक दलहरुलाई जोडेर अगाडि वढेका थियौैं र एक महिनाभित्र सांसदबाट पारित गर्न सफल भएका थियांै । म सँग तितो अनुभव छ नेपाली काग्रेसका स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा हुने वेलामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फाइल लगातार थन्क्याएर राखियो अगाडि वढ्नै दिइन । कुनै वेला अर्थ मन्त्रालयमा थन्काएर राखियो । धेरै अफ्ठ्याराका वाफजुत यसलाई स्थापित गराएका हौं । यसमा मेरो कुनै राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रह छैन । बरु विगत हेर्ने हो भने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भिसिको विगत हेरे हुन्छ ।
– तपाइँ त सहजकर्ता पनि भएको व्यक्ति , किन समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नु भएको छैन ?
म दुई महिनादेखि विरामी भएर काठमाडौं थिए । भरखरै मात्र आएको छु । अझै उपचारमै छु म यसबारे केही बोलेको छैन । दुई÷तीन दिनदेखि बरु मेरो नाम जोडेर अनावश्यक समाचार आउन थालेका छन् भन्ने सुनेको छु म यसको घोर भ्रत्सना गर्दछु । अर्काे कुरा दंगालीले साथ नदिए बुटवल जान्छ भन्ने समाचारहरु आएका छन् यसको खण्डन गर्न चाहान्छु ।
– खासमा यो के समस्या हो र कसरी समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ ?
– अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया के हो ?
यसको प्रक्रिया त नेपाल सरकारले निर्णय गर्नु हो, मन्त्रालयले निर्णय गर्नु हो कम्तीमा मन्त्रीपरिषदको निर्णय आवश्यक पर्छ । यहाँका कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तर यसको पछाडि एउटा समस्या छ । अहिले नै अहिलेकै अवस्थामा हस्पताल हस्तान्तरण गरिदिनुभयो भने भोलिदेखि यो अस्पताल बन्छ हुन्छ । अहिले विशेषज्ञ सेवा छ । विशेषज्ञ डाक्टर छन् उनीहरु संरचन नै नभएको प्रतिष्ठानमा उनीहरु बस्छन् ? उनीहरु बस्दैनन् अनि अस्पताल बन्द हुन्छ ।
त्यसकारण जतिवेलासम्म राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आफूमा स्वागत र फुलफेज सञ्चालन हुने अवस्था आउदैन त्यो स्थितिमा पुग्दैन त्यो वेलासम्म उपक्षेत्रीय अस्पताललाई कसरी सञ्चालन गर्छाै ? हामीसँग खाका हुनु प¥यो हामीसँग मेनपावर हुनु प¥यो । अहिले अस्पतालको साधारण खर्चमा मात्रै ५ देखि ७ करोडसम्म छ । त्यो खर्च प्रष्ठिानले कहाँबाट ल्याउछ ? प्रतिष्ठानलाई फुलफेज सञ्चालन गर्न अरबौं रकम चाहिन्छ कहाँबाट आउछ ? सरकारले एकैपटक अरबौं पैसा दिनसक्ने अवस्था छ कि छैन ? अनि यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई विवादमा तानेर ती नेताहरुको विरुद्धमा गतिविधि सञ्चालन गरेर दलका अमुख मान्छेहरुलाई बोकेर संस्था बन्छ ? संस्था सञ्चालनका लागि त सबै राजनीतिक दलहरुलाई साथमा लिएर जान सक्नुपर्छ सबै सामाजिक अभियान्ताहरुलाई साथमा लिएर जान सक्नुपर्छ अनि मात्रै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पूर्णता पाउछ ।
– तपाई त एउटा प्रमुख राजनीतिक दलको नेता पनि प्रतिष्ठानमा निर्माणमा समस्या भयो भनेर कोही सोधन आएका छैनन् ?
मैले अघि पनि भने म विरामी भएकाले एक÷दुई दिनमात्रै भयो म यहाँ आएको । साँचिकै भन्ने हो भने म यहाँ आएपछि प्रतिष्ठानका बारेमा सोधने तपाईँ पहिलो व्यक्ति हो । तर यति भन्दै गर्दा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बारेमा धेरै चासो राख्ने व्यक्ति हो । आवश्यक परे यसको नेतृत्व पनि गरौला । मैलाई एक शब्द कसैले सोधेको पनि छैन मैले सुनेको छु यहाँको नागरिक समाजका मान्छेहरु प्रतिष्ठानका निम्ति सबैभन्दा बढी लाग्नु भएको छ रे ।